जनता खुसी रहेका देशहरुमध्ये नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो खुसी देश, विश्वमा कति औं स्थानमा ? - AJAMBARI
जनता खुसी रहेका देशहरुमध्ये नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो खुसी देश, विश्वमा कति औं स्थानमा ?
५ चैत्र,२०७४ 254 0
नेपाल दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । जनता खुसी रहेका देशहरुमध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको रिपोर्ट छ । खुसी सूचंकाकमा दक्षिण एसियामा भुटान पहिलो, पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । यो सूचीमा माल्दिभ्स भने समावेश गरिएको छैन ।
नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो खुसी देश भए पनि गत वर्षभन्दा देशमा खुसीको स्तर भने घटेको पाइएको छ । खुसी रिपोर्ट २०१७ मा नेपाल ९९ औं स्थानमा थियो । यो वर्ष भने नेपाल ३ स्थान तल झरेर १०१ औं स्थानमा पुगेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समाधान नेटवर्क एसडीएसएनले जारी गरेको विश्व खुसी रिपोर्ट २०१८ का अनुसार नेपाल विश्वको खुसी मुलुकको सूचीमा १ सय ५६ देशमध्ये १ सय १ औं स्थानमा रहेको खबर अनलाईखबरमा छ ।
दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये पाकिस्तान ७५ औं स्थानमा रहेको छ भने भुटान ९७ औं स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै बंगलादेश ११५औं, श्रीलंका ११६ औं, भारत १३३ औं तथा अफगानिस्तान दक्षिण एसियामा सबैभन्दा पछाडि १४५ औं स्थानमा रहेको छ ।
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा खुसी १० राष्ट्र
यस अनुसार फिनल्याण्ड विश्वको सबैभन्दा खुसी देश बनेको छ । गत वर्ष खुसी देशको सूचीमा ५ औं स्थानमा रहेको फिनल्याण्डले यो वर्ष ठूलो फड्को मारेको छ । गत वर्ष विश्वको सबैभन्दा खुसी देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको नर्वे भने दोस्रो स्थानमा झरेको छ ।
विश्वका सबैभन्दा दुखी १० देशहरु
विश्व खुसी रिपोर्ट अनुसार अष्ट्रिया १२ औं, जर्मनी १५ औं, अमेरिका १८ औं, बेलायत १९ औं, फ्रान्स २३ औं, जापान ५४ औं, रुस ५९ औं र चीन ८६ औं स्थानमा रहेको छ ।
जनताको प्रतिव्यक्ति आय, स्वस्थ जीवन, सामाजिक समर्थन, सामाजिक स्वतन्त्रता, विश्वास, भ्रष्टाचारको कमी आदिजस्ता मापदण्डका आधारमा खुसी सूचकांक तयार गरिएको बताइएको छ ।– एजेन्सी
६ असार,२०७५021
म एउटा किराती पुत्र भएनी प्रदेशको नाम राख्दा "सगरमाथा"...
६ जेठ,२०७५077
सदाझै आज शुक्रबारबाट पनि एकसाथ दर्शकले तीन नयाँ चलचित्र हेर्न पाउने छन् । फ्राइडे...